မူးယစ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး လှိုင် Quarantine စင်တာအဆောက်အဦ လေးလွှာမှ ခုန်ချသေဆုံး
Fortune Plaza Expo ခန်းမကို Fortune Covid Centre ဆေးရုံအဖြစ်အသုံးပြုမည်
ကုန်တင်ယာဉ်မောင်းနှင့်ယာဉ်နောက်လိုက်များ ပိုးမတွေ့​အထောက်အထားပြနိုင်မှ ချောက်မြို့အတွင်းဝင်ခွင့်ရမည်
ရောဂါပိုးထိတွေ့ခဲ့သူကို Quaratine ဝင်ရန်လာခေါ်သည့် ရာအိမ်မှူး အရိုက်ခံရ
ငှက်ပျောခြံလုပ်သားအချင်းချင်း စကားများရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်
ပုသိမ်တံတားသစ်တွင် ဆိုင်ကယ်နှင့် ယာဉ်ငယ်များ ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခွင့်ပြု
မကွေးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က အသွားအလာကန့်သတ်ထားသော အိမ်ထောင်စု ၁၁၀၀ ကျော်ကို ဆန်၊ ဆီ ထောက်ပံ့
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် နှစ်ရက်အတွင်း သစ် ၁၇၀ တန်ကျော်ဖမ်းမိ
ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာ
ကိုဗစ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဟာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်နစ်နာမှု ရှိနေသလို သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဟာလည်း အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မှု ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီး ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူသေးချိန်မှာ (အချိန်အကြာကြီး အတင်းအကျပ် အထီး ကျန်နေထိုင်နေကြရတဲ့) ကလေးသူငယ်များအပါအဝင် လူအများရဲ့ စိတ် ကျန်းမာရေးကိုလည်း အလေးထား ဂရုစိုက်သင့်တဲ့အကြောင်း ...
ကျောင်းဖွင့်ချိန် ကိုဗစ်တွေနဲ့ ဝေးချင်တယ်
တကယ်တော့ ကျောင်းဖွင့်ရက်ကို ကျွန်မတို့ဆရာ၊ ဆရာမတွေတင် မျှော်နေခဲ့တာ မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ကလေးတွေလည်း မျှော်နေမိမှာပါပဲလေ။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် ကျောင်းတွေပိတ်ပြီးလို့ တစ်လလောက် အထိပဲ ပျော်လို့၊ မော်လို့ကောင်းနေတုန်း ဖြစ်ခဲ့တာ။ နောက်ပိုင်း သင်္ကြန် ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ နောက်နှစ် အတန်းသစ်တက်ရောက်ရမယ့် ကျောင်းဖွင့်ရက်ကို မျှော်လင့်ချက်စိတ်ကူးတွေနဲ့ စောင့်ခဲ့ရတာ
သဘောတွေ့ခြင်း၊ မတွေ့ခြင်းထက် ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း သဘောအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားက အခုမှစလုံးရေစလို့ အဘက်ဘက်က ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးပြုလုပ်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ဖြစ်ရေးကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ မြင်တယ်ဗျ။ ညွန့်ပေါင်းထက် ဘယ်ပါတီကပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး ဦးဆောင်အစိုးရဖွဲ့ ဖွဲ့ အလုပ်ဖြစ်ရေး အဓိကထားဖို့လိုတယ်။
ပြောင်းလဲနေသည့် အခြေအနေနှင့်အညီ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးရန်လို
ယနေ့အထိ ရောဂါပိုးကူးစက်ထားသူဦးရေ ရာဂဏန်းမျှသာ ရှိသေးချိန်တွင် မထောင်းတာလှသော်လည်း ပိုးတွေ့ရှိသူများလာမည်ဆိုပါက ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်များလည်း ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်မှုနှင့် ဖြစ်လာနိုင်ခြေများအပေါ် ကြိုတင်ခန့်မှန်း တွက်ချက်ထားနိုင်မှသာ လွှတ်တော်တွင် ဘဏ္ဍာငွေပြန်လည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ထပ်ဆောင်းဘဏ္ဍာငွေအတည်ပြုခြင်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်နိုင်တင်း နှင့် တစ္ဆေမကြောက်ကြသူများ
ကျွန်တော်တို့သည် မျက်ကန်းများမဟုတ်ကြပါ။ နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ မျက်စိမှိတ်၊ နားပိတ်ခံရဖန်များလာ၍ မြင်အောင် မကြည့်ချင် ကြတော့သည့် အကျင့်ဆိုးများ စွဲကပ်နေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ကိုဗစ်ရောဂါအန္တရာယ်ကို မမြင်၍မဟုတ်။ မြင်လျက် ... မကြောက်ကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေဟာ မူဝါဒတွေတစ်ပြေးညီမဖြစ်လို့လား၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေရဲ့ အားနည်းချက်ကြောင့်လား၊ တရားသူကြီးရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာကြောင့်လား၊ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေလိုမျိုး အနည်းဆုံး ပြစ်ဒဏ်ဘယ်လောက် မချမနေရဆိုတာ မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လား...
ဘဘ၏ မေဝတ္ထုကို ဖတ်ပြီးချိန်ကစ၍ ဘဘ၏ စာအုပ်အတော် များများကို ဖတ်မှတ်ဖြစ်သည်။ စံပယ်ဦးဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်၊ ဒဂုန်တာရာ ဝတ္ထုတိုပေါင်းချုပ်၊ မူးယစ်ဝေသောနွေဦးညများ စသည့်စာအုပ်များကို စွဲစွဲမက်မက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာစာ တတိယနှစ် ဂုဏ်ထူးတန်းသို့ရောက် သောအခါ “စာပေဝေဖန်ရေး”ဟူသည့် ဘာသာရပ်တစ်ခု သင်ကြားရသည်။ ထိုဘာသာရပ်တွင် အလေ့လာခံအဖြစ် ဘဘ၏ “အလှဗေဒ (၁)၊ အလှ ဗေဒ(၂)”စာအုပ်များပါဝင်သည်။
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း အသိ၊ သတိနှင့် ဆင်ခြင်စရာများ
ပထမလှိုင်းကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရစဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ်၏ မြို့ရွာအများအပြားတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကို ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် ဒေသန္တရအမိန့်များကို ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါ ဒေသန္တရအမိန့်များမှာ လျော့ရဲလာနေသည်ကို တွေ့မြင်နေရသည်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ခြားများသို့ ခရီးသည် တင်အဝေးပြေးကားများ ပြေးဆွဲခြင်းကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ရာ ထိုအချိန် အကန့်အသတ်အချိန်ကာလမှာ လက်ရှိအချိန်၌ ပျက်ပြယ်သွားခဲ့ပြီလား ဟု မေးစရာရှိနေသည်။
ကျွန်တော်တို့အတွက် ရေ . ရေ . ရေ
မိုးလေဝသအခြေအနေကြောင့်၊ မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာကြောင့် ရေပေးဝေမှုပြတ်တောက်နိုင်သဖြင့် သောက်သုံးရေများ ကြိုတင်စုဆောင်းထားကြဖို့ ရန်ကုန်မှာတော့ လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ရေစုဆောင်းဖို့ရာ ခက်ခဲတဲ့သူတွေ များစွာရှိပါလိမ့်မယ်။ သောက်သုံးရေအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ရာ ကြိုတင်သတင်းထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတာလည်း ကောင်းပါရဲ့။ စုဆောင်းဖို့ရာအတွက် ထိထိရောက်ရောက် ကူညီပေးထားနိုင်မယ့်သူတွေ များစွာရှိလာရင်လည်း ပိုမိုကောင်းပါရဲ့။
ရုံးလုပ်ငန်းအတတ်ပညာနှင့် ရုံးစာရေးသားခြင်း အနုပညာ
ရုံးလုပ်ငန်းပညာကို အတတ်ပညာတစ်ခုအနေနှင့် မှတ်ယူသဘောထားကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် သတ်မှတ် ပညာအရည်အချင်းပြည့်မီသူများကို ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခန့်ထားပြီးပါက ၎င်းတို့ကို ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များနှင့် ဌာနတွင်းသင်တန်းများတွင် ရုံးလုပ်ငန်းအတတ်ပညာများကို သင်ကြားပေးကြသည်။ အဆိုပါသင်တန်း များတွင် ဝန်ထမ်းများကို သင်ကြားပေးရုံသာ သင်ကြားပေးနိုင်ကြပြီး လေ့ကျင့်ပေးမှုကိုကား မပြုလုပ်ပေးနိုင်ကြပါ။ ယခင်ကဆိုလျှင် သင်တန်းဆင်းများကို အလုပ်သင်ကာလ သက်သက်သတ်မှတ်ထားပြီးလျှင် ဌာနအတွင်းရှိ ဌာနခွဲ၊ ဌာနစု၊ ဌာနစိတ်များသို့ သုံးလတန်သည်၊ ခြောက်လတန်သည် လှည့်လည်သင်ကြားစေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှ အရာရှိများ ဆိုလျှင် အခြားသောရုံးဌာနများ၊ မြို့နယ်ခရိုင်များသို့ လှည့်လည်ပြီး တစ်နှစ်ခန့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်စေခဲ့ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ဆရာများ ပြောပြ၍ သိရှိရပါသည်။
သေရေးထက် နေရေးအရေးကြီးကြောင်းကို နားမလည်၍လည်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အခြေခံစည်းကမ်းကလေးများကို လိုက်နာကြစေလို၍ ဖြစ်ပါသည်။ ယခု အများစုသော လူအများကို မြင်တွေ့နေရသည်မှာ မက်စ်တပ်ခြင်းမရှိ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခြောက်ပေကွာ မနေကြဘဲ ပူးပူးကပ်ကပ် စကားတပြောပြောနှင့် ပုံမှန်အခြေအနေကဲ့သို့ ပြုမူလုပ်ရှားနေကြသည်ကို မြင်တွေ့နေရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာကတော့ ထူးခြားတယ်။ ထိုင်းလောက် အရေအတွက်မများဘူးဆိုတာ စစ်ဆေးနိုင်တဲ့အရေအတွက် နည်းလို့။ စက်ပစ္စည်း မရှိလို့ ဆိုတယ်။ များများစစ်ရင် များများတွေ့နိုင်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ များများစစ်နိုင်တဲ့ထိုင်းမှာ နေ့စဉ် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူက ဆယ်ဂဏန်းအောက် ရောက်နေတာ ထူးခြားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုင်းကတော့ ဖြေလျှော့ဖို့ သတိထားပြင်နေပါပြီ။ ဖိလစ်ပိုင်ကလည်း နိုင်ငံတကာ ကုန်တင်နဲ့ စီးပွားရေး လေယာဉ်တွေ ဆင်းခွင့်ပြုနေပြီ။ မလေးရှားလည်း စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ဖြေလျှော့ပေးနေပြီ။
ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းကို တားစီးဖို့ Stay At Home Condition ကျင့်သုံးစို့
ဒီရောဂါပိုးဟာ အမှန်တကယ်ကို ကူးစက်လွယ်၊ သေဆုံးလွယ်တာကို အမြဲနှလုံးသွင်းပြီး အခုအခြေအနေမှာ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေထိုင်သွားလာ လုပ်ကိုင်ကြတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အခုချိန်ထိ ယခုပမာဏ ဖြစ်နေတဲ့အပေါ် မပေါ့ဆကြစေချင်ပါဘူး။
ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ
အစိုးရအပိုင်းကရော၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပါလာမယ့် နိုဝင်ဘာလမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ဆိုထားတော့ ဘာပဲပြောပြော ကိုဗစ် ၁၉ ကပ်ရောဂါဘေးကနေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကျော်လွှားပြီး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အဆင်ပြေချောမွေ့ စွာကျင်းပနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း ...
တစ်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနက စီမံချက်ပေါင်း ၇၀ ရှိတဲ့အကြောင်း ရေးသားတင်ပြလာပါတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တယ်၊ စီမံချက်ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိရှိ သားဖွားဆရာမတွေနဲ့ မဆိုင်တဲ့ဟာ မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။